Topnepalnews.com | लाइसेन्स आवेदन अब अनलाइनवाटै,कसरी भर्ने अनलाइन आवेदन ?
Posted on: December 22, 2016 | views: 887
काठमाडौं,पुस ७ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको फाराम अब अनलाईनवाटै भर्न पाईने भएको छ । आवेदन बुझाउन लाग्ने गरेको ठूलो भीडलाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले आइतबारदेखि अनलाइनबाटै लाइसेन्स आवेदन लिन सुरु गर्न लागेको हो । आइतबार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यो सिस्टमको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसको लागि सिंहदरबारमा सफ्टवेर जडान गरी अहिले डिपार्टमेन्टमा इन्जिनियरिङ काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। यो प्रक्रिया लागूभएसँगै चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि सास्ती खेप्नु पर्नेछैन् ।
दुई महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको सवारीचालक लाइसेन्स फाराम भर्ने प्रक्रिया मंसिर ८ देखि ललितपुरको एकान्तकुनाबाट सुरुभएपनि झिसमिसेमा पुग्नेहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य हुदै आएका थिए । सिमित टोकन बाड्ने भएकाले जसले सुरुमा टोकन पायो उसले मात्र त्यो दिन काम सुरु गर्न सकिने भएकाले पनि अघिल्लो रातदेखि नै लाइन लाग्ने गरेको थिए । अब यो समस्याको अत्यहुने भएको छ ।
यसअघि यातायात मन्त्री रमेश लेखकले कार्यालय पुगी लाइसेन्स आवेदन प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशन अनुसार अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको यातायात कार्यलयले जनाएको छ । अनलाइनबाट फारम भरी सिस्टमले एसेप्ट गरेपछि आवेदकले एउटा प्रिन्ट पेपर पाउँछ। पेपरमा तोकिएको समयमा आवेदक पुनः फोटो र फिंगरप्रिन्टका लागि तोकिएको स्थानमा पुग्नेछ।
यातायात कार्यालयमा हुने अव्यवस्थापन हट्ने
अनलाइनबाट फारम भर्ने सिस्टमले यातायात कार्यालयमा हुने अव्यवस्थापन हट्नेछ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रक्रिया केहि महिना रोकिएपछि पहिलेको तुलनामा यातायात व्यवस्था विभागमा चालक अनुमतिपत्रको फाराम भर्नेहरुको भिड बढेको थियो ।
यातायात कार्यालयमा अहिले मध्यरातदेखि नै लाइन लाग्नेहरुको भिड बढ्ने गरेपनि यो व्यवस्थाले सहज बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अब सवारी अनुमतिकै लागि भनेर झिसमिसेमा लाइृन बस्न जानुपर्ने छैन् । यसबाट बिचौलियालाई दिनुपर्ने कमिसन हट्ने र विवरणहरु गल्ती हुने समस्या पनि हट्नेछ।
कसरी भर्ने अनलाइन आवेदन ?
त्यही समय पुग्नेगरी त्यो प्रिन्ट कागज लिएर सम्वन्धित कक्षमा जानुपर्दछ। त्यहाँ पुनः फोटो र फिंगरप्रिन्ट लिइसकेपछि भोलिपल्टदेखि नै अन्य परीक्षामा सहभागी हुन सकिनेछ। उत्पयकाबाट लिइने स्मार्टलाइसेन्स बाहेक अन्यको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन।
सुरुवातमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागू हुनेछ । विभागका अनुसार फारम त देशभरीबाटै भर्न सकिनेछ । तर, अनलाइन फारम भरेका हरुको लिखित परीक्षादेखि ट्रायल सबै काठमाडौंमै हुनेछ ।